सर्वोच्चको आदेशपछि अनसनस्थलबाटै डा. गोविन्द केसी पक्राउ
Monday, 8 Jan, 2018 8:25 PM
काठमाडौं, २४ पुस – सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रहरीले आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको छ । अदालतको मानहानी मुद्दामा सर्वोच्चले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार विहान ९ बजे उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।
आदेशपछि प्रहरीले केसीलाई अनसन स्थलबाटै पक्राउ गरेको हो । केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै सोमबार आमरण अनसन सुरु गरेका थिए ।
अनसनवारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालत न्यायको किनबेच गर्ने ठाउँ भएको र पराजुली माफियाको डन भएको बताएका थिए ।